I-China Hemiplegic Walker YabaNtwana yaBantwana kunye neFektha | Hongzhu
Indawo yoLungiso lweenkozo J15
I-Hemiplegic Walker yaBadala
Isixhobo seCervical Neck Traction Isixhobo B01-1 Super Soft
Ukuhambahamba kweHemiplegic kubantwana
Iipropathi UkuBonelela ngoNyango lweeNkozo-ezikhethekileyo zaBantwana
Isici Ukuguquguquka, ukuhambisa, kunye nokuguquguquka, ukuhlangana ngokulula
Isixhobo Izinto zensimbi ezingenazintsimbi
Umbala Isilivere neblue, iorenji, luhlaza, bumnyama
Ukusetyenziswa Ukukhubazeka kwamalungu asezantsi kunye nabaphazamisi
Isondo Ukuthula akenzakalisi phantsi
Ipakishwe ibhokisi yephepha
Adopt imathiriyeli yesiponji ye-macopolecule ukuthintela ukutyibilika kwaye ikhuphe ixesha elide
Isikhuseli sentuthuzelo, B ibhanti
Isiponji somgangatho ophezulu sigcwalisiwe kwifayile yokubamba
Iindwangu ezinamaqhina ezinokuphefumla kulula ukuzithathela kuye kwaye uzihlambe
Ubomi obude, kulula ukucinezela
I-caster yendalo iphela
Dlala ivili yerabha, anti-slip, anti-ukunxiba, ubomi benkonzo ende
Ukulungiselela abantwana ezahlukeneyo, amaqela ahlukeneyo
Thintela i-rollover kunye nokulimala ngexesha lokusebenzisa
Ispack axillary bracket
Thintela ukwenzakala kwengalo ngelixa uhamba kwaye unciphise ukulimala kwengalo
Abahambi ngeenyawo abangama-axillary:
Ububanzi bomzimba wangaphezulu bunokuhlengahlengiswa ukuze ulungele amaqela awahlukeneyo abantu
Isandla esijikeleze iqhosha lesikere:
Uyilo olutsha lwesokisi lenza unxibelelwano lube luzinze ngakumbi
Amanyathelo okhuseleko kwimveliso
1. Ngaphambi kwendibano, nceda ujonge zonke izinto ezizezawo nawuphi na umonakalo ngexesha lokuhamba. Ukuba yonakele, nceda ungayisebenzisi, nxibelelana nenkonzo yabathengi, kwaye ulinde eminye imiyalelo.
2. Qinisekisa ukuba iimarble emilenzeni yohambo zihlengahlengisiwe kwimingxunya ehambelana nomlenze ngamnye ukuqinisekisa ukungqinelana kobude bokuhamba.
3. Qinisekisa ukuba zonke i-screws, i-nati kunye ne-bolts ziqinisiwe.
4. Jonga ikhava yerabha yonyawo ityhubhu, kwaye uyihlanganise ukuba ithe yawa. Ukuba yonakele, nceda unxibelelane nenkonzo yabathengi ukuyibuyisela.
5. Imilenze yomine enesembozo irabha kufuneka ichukumise umhlaba ngaxeshanye xa usolula.
6. Musa ukuma ngeenyawo okanye uwe.
Edlulileyo: I-Hemiplegic Walker yaBadala
Okulandelayo: Ukuhambahamba kweHemiplegic kubantwana
Umhambi onokuhlengahlengiswa kunye nesihlalo
Ukuhamba kwabantu abadala kunye nesihlalo
Uhamba Ngezonyango Ngesihlalo
Abahambi bezonyango abanamavili kunye nezihlalo
Ukuhamba ngokuHamba okuHlaziyiweyo kobuso